Xiddiga Barcelona Sergi Roberto Ayaa Laga Saaray Kulanka Paris Saint-Germain
Home Champions League Xiddiga Barcelona Sergi Roberto ayaa laga saaray kulanka Paris Saint-Germain
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay ku qasbanaan karto inay sameyso la’aanta Sergi Roberto labada lugood ee wareega 16ka Champions League ee ay la ciyaarayaan Paris Saint-Germain .
Daafaca midig ayaa dhawaan ka soo laabtay shaqadii uu ka maqnaa mudada dheer ee Athletic Bilbao wuxuuna sameeyay bilowgiisii ​​ugu horeeyay in ka badan labo bilood kulankii Granada ee Copa del Rey fiidkii Arbacada.
Si kastaba ha noqotee, Roberto wuxuu qaatay kaliya 57 daqiiqo kulankaas ka hor inta aan lagu qasbin mar kale, taasoo dhalisay cabsi dheeraad ah oo dhaawac kale oo halis ah oo 28 jir ah, oo sidoo kale uu ku dhacay coronavirus intii uu ku maqnaa.
Blaugrana ayaa tan iyo markaas xaqiijisay in Roberto uu dhaawac ka soo gaaray bowdada, sida laga soo xigtay TV3 , waxaa laga yaabaa inuusan qeyb ka qaadan labada lugood ee tartanka Champions League ee ay la ciyaarayaan PSG.
Barcelona ayaan waqti u dhigin soo laabashada daafaca, laakiin warbixinta ayaa sheegeysa inuu garoomada ka maqnaan karo lixda isbuuc ee soo socota, taasoo la micno ah inuu seegi doono kulanka 16ka Febraayo ee Camp Nou iyo safarka Parc des Princes ee Maarso 10.
daafaca kale ee garabka midig ee la aqoonsan yahay ee Sergino Dest ayaa diyaar ah, Oscar Mingueza ayaa sidoo kale matali kara dhanka daafaca hadii loo baahdo.
Previous articleWaqtiga la ciyaarayo Kulanka Manchester City Vs Everton oo lasoo bandhigay
Next articleWax ka ogoow saxiixyadii ugu xumaa ee Jose Mourinho.